indrindra ireo teratany vahiny. Araka ny fijoroana vavolombelona nataona renim-pianakaviana iray nanaiky niresaka tamin’ny mpanao gazety Tia tanindrazana, tsy misy intsony ny teny mamy sy ny fifanintonana raha vao mifampijery fa ny fitaovana fitsapana hafanana no avy hatrany dia harantin’ireo mpanjifa. Izay vehivavy sahy ihany, araka izany, no manatona azy ireo. Nomarihiny fa maharitra elaela mihitsy ny fijerena vao mifampiady varotra. Anisan’ny jeren’ireo mpanjifa ny haavon’ny hafanan’ilay mpivarotena, sao dia voan’ny gripa izy, mikohoka ve ?... Aorian’izay dia mbola fady tanteraka ny fifanorohana sy ny fihetsika manaitaitra rehetra fa avy hatrany dia ny firaisana ara-nofo no hirosoana. Mikasika ny trano fandraisam-bahiny moa dia nomarihiny ihany koa fa maromaro amin’izy ireny no lasa mitsapa ny hafanan’ireo olona tonga manatona amin’izao, indrindra fa ny mpivarotena. Notsipihiny kosa fa ireo mpanjifa mpanam-bola sy ireo teratany vahiny no tena sarotiny.